သွယ်လျ လှပလွန်း တဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း – Shwe Naung
သွယ်လျ လှပလွန်း တဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း
N N | January 27, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ရစ်လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုး ခေါ်ကြပြီး ညို့အားပြင်းတဲ့အချိုးအစား တွေနဲ့ ပင်ကိုယ် အလှ တွေကြောင့် ပုရိသပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဆက်ဆီ မော်လ်ဒယ် မင်းသမီးချောလေး ကတော့ နွယ်နွယ်ထွန်းပဲ ဖြစ် ပါတယ်နော်..။
ချစ်စရာ ကောင်းပြီးချောမော လှပတဲ့ မျက်နှာလေး အပြင် ထိရက်စရာ မရှိလောက် အောင် အပြစ်ကင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား တွေနဲ့ တီတီတာတာ လေးတွေ ပြောတတ် တာတွေ ကြောင့်လည်း ယောကျ်ားလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက အ ားပေးချစ် ခင်မှုတွေကို အများဆုံးရရှိ ထားတာပါ..။
ရစ်က တော့ သူမရဲ့ ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အမြဲဖမ်းစား တတ်သလို အားကစားလေ့ ကျင့်ခန်းတွေလုပ် နေတဲ့ဘလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှတတ်ပြီး အခု လည်း အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက် ပြန်ပါတယ်နော်..။
ပျော့ပျောင်းပြီး ကျစ်လစ်သွယ် လျတဲ့ပင်ကိုယ် အလှတွေကို အရှိအတိုင်း ထုတ်ပြကာလှ အောင်နေပေမယ့် ထိုင်ကြည့် မယ့်သူမရှိဘူးဆိုကာ ကိုယ်ကျပ် ဝတ်စုံလေး ကိုဝတ်ကာ သူမရဲ့အချိုးအစား တွေကို အထင်းသား ပေါ်လွင်နေတဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာပါ..။
“ဘယ်လောက် လှအောင်နေနေ ထိုင်ကြည့် ပေးမယ့်သူမရှိတော့ လှနေ ရတာ အလကားရယ်.” ဆိုပြီး စကားချိုချို လေးနဲ့ သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေး တွေကို နွယ်နွယ်ထွန်းက ပရိသတ် တွေကို ဝေမျှထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..။
ဆွဲအားပြင်းတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ အမြဲမိမိုက် ဖမ်းစားထားတဲ့ မော်လ်ဒယ် မင်းသမီးချောလေး နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ် အားလုံးအတွက် ဝေမျှတင်ဆက် ပေးထားတာမို့ သဘောကျ နှစ်သက်ကြလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်နော်..။
Source : Nwe Nwe Tun’s Fb Acc
‌မေရတီဇော်ရဲ. အားကစား ဝတ်စုံလေး နဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ ပုံရိပ်များ…
အပီ အပြင် လှုပ်ခါ ရမ်း ကာ ကပြ ထား တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်….
ထပ်ခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် အမိုက်စား ဖက်ရှင်နှင့် အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..